Dike Àláá Mmụọ - Igbo News | News in Igbo Language
Jan 22, 2020 - 14:38 Updated: Jan 23, 2021 - 20:18
Ùgbòrò abụọ ka òkù na-akpọ dike
Ọ kpọọ ya na ndụ, ọ kpọọ ya n'ọnwụ
Ihe emeghị n'ízù, o mee n'ọnwa
Maka na isi gbàá ahọ, chaa áwọ,
Nwa onye ụwa ga-azarịrị chi ya òkù.
Ụzụ tụọ n'ili dike
Ọha mmụọ na ọha mmadụ anụ ísì ozu ya
Maka na ọ na-abụ ekwe kụọ
Ọ bụ gịnị na-afịọ?
Oke mmiri àtáálá n'udummiri
Ihe mèrè na Ndịkeliọnwụ
Oke mmadụ ebuláálá akwụkwọ
Gìdì gìdì gìdì
Kotìko dùm dùm dùm
Chaị! íbo èzéé n'obí ézè
Ebubedike alaa mmụọ
Gịnị ka a na-ekwubèdị ihe a?
Chukwuemeka Ike àpàchiela anya
Eze Ndikeliọnwụ ejebego obodo afụdobe
Izùtè ndị mbụ na ndị ègèdè n'ọhà mmụọ.
Ihe emee n'obi eze
Ọ na-abụ ézè azụ kakpụọ mma
Ọ si oke òsìmìrì lọta
Onye ije alakwúrúlá chi ya.
Chukwuemeka bụ dike ụbụrụ nkọ
Ọkaibe n'ọhịa edemede
Ọkammụta nwere ùgwù
Chaị! eze obi umeala alakpuo ụra.
Ma ya dịba, maka na ụwa a bụ ahịa
Onye zụcha nke ya, ọ labá
Chukwuemeka Ike ladị mma.
Kókó kókó tìkó tìkó
Dùm dùm kótì
Eze, ka mkpụrụ obi gị zùrú ike udo
Ụbọchị nkwọ, ka anyị zụkọọ ọzọ n'ọhà mmụọ
Onye ijè ladị mma.
A Dụọla Ndị Ji Otu Ahọ Efe Ala Nna Ha Ka Ha Mụọ Ọrụ Aka...